Raha fitiavana tena mijoro tsara sy hary fototra manko, tsy ho ravan’ny endrikendrika toy izany. Matoa izy tsy niezaka ny handravona ny fifankatiavanareo, dia satria koa tsy tena lalim-paka ny fitiavany. Noho izany, aza misisika ny hiaraka aminy intsony. Ny lehilahy rahateo, raha vao arahina dia vao mainka mitsoaka. Avelao izy ho any, fa raha toa ka tiany ianao dia hanenina izy nisaraka taminao. Raha toa ka manenina izy dia hiverina aminao. Na izany aza anefa, aza miandry be ny fiverenany fa tohizo ny fiainanao, aza mampiseho endrika malahelo eo anatrehany, fa manjary ho lasa fihomehezany fotsiny ianao. Raha tena manan-danja aminy ianao dia niezaka nandravona ny mety ho olana aloha izy, fa tsy avy hatrany dia niala. Izay no tadidio.
Lehilahy aho, 18 taona ary mbola mianatra. Misy vehivavy miaraka amiko izay, dia feheziny be mihitsy aho, tsy avelany mivoaka miaraka amin’ny namako. Inona no ataoko, sa inona no azoko lazaina azy fa indraindray aho te hisaraka aminy mihitsy ?
Rehefa tia indraindray dia tsy foy hozaraina amin’olona mihitsy ilay olon-tiana. Hazavao aminy fa mba mila ny fahafahanao kely sy ny fahaleovan-tenanao ianao. Toy izany koa izy. Fomba iray isokafanareo amin’ny hafa izany no sady hitondra rivo-baovao eo amin’ny fiainam-pitiavanareo ihany koa. Raha tsy izany dia ho mora hifankaleo ianareo. Diniho tsara ihany koa anefa, sao ianao variana loatra amin’ny namanao ka izany no mahatonga azy ho sarotiny. Ezaho foana mba hifandanja tsara ny fiarahanao aminy sy ny fiarahanao amin’ny namanao. Ataovy izay hahatokisany fa azy manontolo ny fitiavanao ary mijanona ao am-ponao foana izy, na dia amin’ny fotoana tsy iarahanareo aza.
Mikorontana be ny fadimbolako. Efa 21 taona aho izao, fa mbola tsy tonga fotoana isam-bolana ohatry ny olona rehetra ihany. Inona no mahatonga izany, dia inona no tokony ataoko ?
Ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana, na hôrimônina, no mahatonga ny fadimbolana tsy handeha ara-dalàna, amin’ny ankapobeny. Hatreto, tsy tena misy fomba azo antoka fa mandamina azy io. Azo andramana ihany ny mandrindra azy, amin’ny alalan’ny “traitement hormonal”, saingy tsy azo antoka 100 % fa mandaitra. Mila manatona dokotera “gynécologue”, izay afaka manoro hevitra sy mampahafantatra izay tokony atao. Tena ilaina mihitsy io, sao misy fiantraikany amin’ny toe-batana sy ny fananahana.